Waraysi ku saabsan heshiiskii soomaalida ee shirka Eldoret.
Wariyaha Idaacada IQRA Maxamed Aden Terra oo ku sugan magaalada Eldoret oo haatan ay heshiis saxiixeen 21 hogaamiye kooxeedyada soomaaliyeed ee shirku uu uga socdo haatanna uu guda gali doono 2da waji ee u dhiman ayaa maanta waxaanu su’aalo ka waydiinay shirka nabadaynta soomaalida ee magaaladaas ugu horayna waxaan way diinaynaa:
Ridwan: Siduu yahay Jawiga goobta shirku uu ka dhacayo ee soomaalidu ay ku heshiiyeen haatan?
Terra: aad iyo aad ayaa loo faraxsanyahay tan iyo markii soomaalida ay ku heshiiyeen wajigii ugu horeeyay ee shirka oo haatan waxaad arkaysaa hogaamiyayaasha oo isgacan qaadaya oo qaar kood ay wada sheekaysanayaan kuna faraxsanyihiin talaabada lagaaray shalay ee ay kamid yihiin:
1- Dhisi taanka dawlada federal oo soomaalidu ay u dhanyihiin
2- Xabad joojin buuxda in shakhsi walba uu ka sameeyo goobta uu kataliyo
3- Amaan galinta hay’adaha samafalka ee soomaaliya ka hawl gala.
4- In aan wax dhibaato ah loo gaysanin kaalmada loo gudbinayo shacabka tabaalaysan.
5- ka shaqaynta ladahgaalanka argagixisada.
Waxaana haatan heshiiskaasi ay u dhan yihiin dhamaan hogaamiyayaasha ka soo qayb galay shirka marka laga reebo ku xigeenadii shaar gaduud oo kala ah : sh aden madoobe iyo xaabsade oo wali aan ka soo qayb galin shirka.
Ridwan: Mar hadii wajigaas laga gudbay maxaa ku xiga oo la guda galayaa?
Terra: waxaa loo gudbiyaa dhisitaanka Gudi ka kooban 75 xubnood oo ka soo sheqeeya diyaarinta shirka, ajandayaashiisa iyo sidii uu shirka u socon lahaa si markaasi loo guda galo labada waji ee kale ee shirka u dhiman.
Ridwan: Heshiiska lagaaray Gudiga qaban qaabinaya shirka ee beesha caalamka ee goobjooga ka ah siday u arkeen?
Terra: Markii arintaas ay IGAD maqleen aad ayay ugu farxeen waxaana uu sheegay ergayga Kenya ee arimaha soomaaliya Elijah Mwangale in ay u samayn doonaan xaflad loogu damaashaadayo guushaas khamiista kadib heshiiska ay gaareen oo madaxda dalalka IGAD ay ku farxeen waxaa kaloo arintan soo dhoweeyay midawga reer yurub iyo jaamacada carbta iyo ururada kale ee shirka goobjooga ka ah.
Ridwan: Horay hogaamiyayaasha soomaalida inta ay wax saxiixaan ayaa hadana ay khilaafi jireen hadaba kani muxuu kaga duwanyahay shirarkii ay horay usaxiixi jireen?
Terra: kani waxaad moodaa in beesha caalamka ay aad u danaynayaan isla markaana ay doonayaan in shirkan uu noqdo mid mira dhala oo lagusoo af jaro xiisada ka aloosnayd soomaaliya , waxaana saaran shirka caadaadis caalami ah.
Radio Iqra: iqrafm@bidii.com
Wararka kale ee IQRA http://www.somaliatalk.com/iqra
....ELDORET: Taxanaha Wararka
WARARKA KALE EE OCTOBER -GUJI